Loharano mafana eo akaikin'ny volkano Batur " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Loharano mafana eo akaikin'ny volkano Batur
Loharano mafana eo akaikin'ny volkano Batur (loharano mafana Batur)
Topimaso topy momba ny loharano mafana akaikin'i Batur
Eo akaikin'ny volkano Bali Batur dia misy tahirin-drano fitobiana. Ny hafanan'ny rano ao amin'izy ireo dia mahatratra +50 ary misy mineraly marobe. Ity fananana rano ity dia manana fanafody. Ny loharano mafana dia any amin'ny faritra atsinanan'ny nosy, akaikin'ny tanànan'i Toya Bungkah, eo amoron'ny Farihin'i Batur.
Ny akaiky ny volkano Batur dia namaritra ny fisian'ny solifara sy mineraly be dia be ao anaty rano. Ity rano ity dia misy fiatraikany tsara amin'ny hoditra, hozatra miala sasatra, fanasitranana aretim-po ary tsy fiterahana. Noho ny hafanan'ny lohataona avo dia mihena ny fanaintainana miaraka.
Ny loharano akaikin'i Batur dia malaza amin'ny mpizahatany sy amin'ny mponina eo an-toerana. Ny olona avy amin'ny vohitra akaiky teo tamin'ny andro taloha dia tonga mba hositranina. Ary rehefa nahazo endrika maoderina ny nosy Bali, nanjary toerana fialantsasatra malaza, ny loharano dia ampy fitaovana tsara, omena fantson-drano.
Lohataona mafana voajanahary Batur
Androany, eo akaikin'ny Farihin'i Batur sy ilay volkano eponymous dia ny kompania Batur Natural Hot Spring. Misy dobo kely 4 feno rano mafana izy io. Any amin'ny dobo samihafa dia hafa ny mari-pana amin'ny rano. Amin'ny mafana indrindra dia mahatratra +50, amin'ny telo hafa - manomboka amin'ny +38 ka hatramin'ny 40. Misy pisinina lehibe 1 koa ahafahanao milomano. Ao anatiny dia manana mari-pana +20 ny rano. Ity dobo ity dia manolotra fahitana mahafinaritra momba ny farihy.
Irena ireo dobo ireo. Rano avy amin'ny tarehimarika haingon-trano miorina amin'ny sisiny. Azo atao ny mametraka ny lamosinao ao ambanin'ny jet mba hanao fanorana rano tsara ho anao.
Ho an'ny olon-dehibe - 150 000 ropia.
Ho an'ny ankizy - 75 000 ropia.
Ho an'ny olon-dehibe amin'ny sakafo atoandro - 200 rupees.
Ho an'ny ankizy misakafo antoandro - 120 000 rupees
Sarin'ny loharano mafana Batura
Batur amin'ny loharano mafana
Batur Hot Spring Hot Springs
Lohataona mafana Batur
Loharano mafana eo akaikin'i Batur amin'ny sari-tany
Hafahafa fa ny loharanom-baovao Banjar dia malaza kokoa noho ireo. Eto anefa dia madio kokoa ny rano, ary mazava ho tsara tarehy kokoa ny panoramas. Angamba, ny fanontaniana dia amin'ny vidiny, nefa ny fahasamihafana dia efa ho folo heny.